Gudoomiye Mahad Cawad oo xildhibaanada u jeediyay in ay gutaan masuuliyadooda Qaran – Kalfadhi
Gudoomiye Mahad Cawad oo xildhibaanada u jeediyay in ay gutaan masuuliyadooda Qaran
Gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka hadlay baaqashada kulamada golaha shacabka, wuxuuna xildhibaanada fasaxyada ku maqan u jeediyay in ay dib u soo noqdaan.
Mahad Cabdalla Cawad wuxuu sheegay in shaqo badan ay golaha hortaalo. Xildhibaanada ayuu xasuusiyay in ay gutaan waajibaadkooda.
Gudoomiye ku xigeenka labaad Mahad Cawad ayaa mudooyinkan dalka uga maqnaa sababo caafimaad, wuxuuna ka soo noqday dalka Turkiga.
Golaha shacabka baarlamanka federaalka ah ee Soomaaliya ayaa hawlahooda dib u bilaabay toddobaadkii hore, waxaana kooram la’aan u baaqday mid ka mid ah kulamadii toddobaadkaas.
Puntland: Golaha wakiillada oo sheegay in uu hoos u dhacay dhaqaalaha dowladda
Gudoomiyaha golaha wakiillada oo ka tacsiyeeyay geerida gudoomiyihii maxkamadda sare ee Puntland